कोरोना रोकथामका लागि नेपालगञ्जमा उच्च सतर्कता
बुद्धबार, चैत्र ११, २०७७ साल
नेपालगञ्ज,फागुन ११ । भारतका विभिन्न शहरमा कोरोना संक्रमण बढेपछि बाँकेमा पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेको बुधबार बसेको बैठकले जमूनाह नाकामा उच्च सावधानी अपनाउने..
रिहानालाई जलाउने पक्राउ
मंगलवार, चैत्र १०, २०७७ साल
जिल्ला बाँके साबिक हिरिमिनिया गा.वि.स.वडा नं.८ हाल डुडुवा गा.पा.वडा नं.६ वस्ने मो.समिम शेषको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जिल्ला बाँके साविक लक्ष्मणपुर गा.वि.स.वडा नं.८ हाल नरैनापुर गा.पा.वडा नं. २ वस्ने..
नेपालगञ्जको कारकादौंमा एकसाथ ५ सडक निर्माण गरिदैं
सोमबार, चैत्र ९, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, चैत ९ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडा अध्यक्ष दीपक वर्माले सोमबार अर्को सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ । केहीदिनभित्रै कारकादौंमा पाँचवटा सडकको शिलान्यास भएको छ । कारकादौंको..
जजकको जाहेरी दिएर बयान फेर्ने महिलालाई कैद सजाय
आईतवार, चैत्र ८, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, फागुन ८ । जरबजस्ती करणीको झुठ्ठा मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै बाँकेमा एक महिलालाई जिल्ला अदालतले कैद सजाय सुनाएको छ । अदालतको फैसलापछि चारवर्षदेखि फरार रहेकी कोहलपुर नगरपालिका ७ की..
जबरजस्ती करणी प्रयास गर्ने ब्यक्ति पक्राउ
बुद्धबार, चैत्र ४, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, चैत ४ । नेपालगञ्जमा १६ बर्षिया बालिकालाई जबरजस्ती करणी प्रयास गरि ज्यान मार्ने प्रयास गर्ने युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दुई महिनादेखि फरार रहेका नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर..
एकपछि अर्को सडक निर्माण गर्दै वडा अध्यक्ष दिपक वर्मा
मंगलवार, चैत्र ३, २०७७ साल
नेपालगञ्ज,चैत ३ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष दिपक वर्माको पहिलो प्राथमिकता सडक निर्माणमा देखिएको छ । वर्माले एकसाताभित्रै दोश्रो सडकको निर्माण सुरु गरेका छन् । मंगलबार..
बाँकेको ईगाउँमा यसरी नाचिन्छ सिंगारु नाच
बिहीवार, फागुन २७, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, फागुन २७ । नेपालगञ्जमा बिहिवारदेखि सुरु भएकोराष्ट्रिय वाङ्मय गोष्ठी तथा लुम्विनी सांस्कृति महोत्सवमा विभिन्न सांस्कृति कार्यक्रम भए । जसमा सिंगारु नाचले सहभागी अधिकाँशको मन जित्न सफल भयो । साविक..
नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय वाङ्मय गोष्ठी तथा लुम्विनी सांस्कृति महोत्सव सुरु
नेपालगञ्ज, फागुन २७ । नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय वाङ्मय गोष्ठी तथा लुम्विनी सांस्कृति महोत्सव विहिबारदेखि सुरु भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र भेरी साहित्य समाजको आयोजनामा सुरु भएको महोत्सवको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका..
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङ सम्मानित
नेपालगञ्ज, फागुन २७ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवहादुर कुरुम्बाङलाई सम्मान गरिएको छ । कोभिड माहामारी नियन्त्रणमा बाँके जिल्लामा रहेर महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै सेना दिबसको अबसरमा नेपाली सेनाबाट प्रधानसेनापति..
नेपालगञ्जलाई महानगर बनाउन डिपिआरको काम सुरु
बुद्धबार, फागुन २६, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, फागुन २६ गते । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा विकास गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । महानगरपालिकाका लागि डिपिआरसँगै एकीकृत विकास योजना समेत तयार भईरहेको छ । नगर प्रमुख..
१११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नेपालगञ्जमा बिबिध कार्यक्रम ।
सोमबार, फागुन २४, २०७७ साल
नेपालगन्जमा,फागुन २४ । १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला (नारी) दिवसको अवसरमा सोमबार बाँकेको नेपालगन्जमा र्याली, सभा, फुटसल प्रतियोगिता र दिप प्रज्वलन गरी मनाईको छ । प्रत्येक वर्ष मार्च ८ का दिन..
आगलागी पीडितलाई राहत लिएर पुगे प्रजिअ राम वहादुर
नेपालगञ्ज, फागुन २४ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवहादुर कुरुम्बांग सोमबार आगलागीबाट क्षतिग्रस्त बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका १ सुइया गाउँ पुग्नुभएको छ । प्रजिअ कुरुम्बांग गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहसहित गाउँ..
भेरी अस्पतालमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि भुषालको सहयोग
नेपालगञ्ज, फागुन २४ गते । नेपालगञ्जस्थित भुषाल इन्टरनेशनलका सञ्चालक पार्थ भुषालले भेरी अस्पतालका लागि आवश्यक एम्बुलेन्स खरिदका लागि रकम सहयोग गर्नुभएको छ । सोमबार ९ लाख ५६ हजार ६२४ रुपियाँको..
बाँकेको नरैनापुरमा आगलागीमा २५ घर जले
नेपालगञ्ज, फागुन २४ गते । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका १ सुइयागाउँमा सोमबार आगलागी हुँदा २५ घर जलेर नष्ट भएका छन् । विहान ११.३० बजेतिर लागेको सुरु भएको आगलागी दमकलको सहयोगमा सुरक्षाकर्मी..
निर्माण व्यवसायी सङ्घमा पुनः खड्का र लिलाराज
आईतवार, फागुन २३, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, फागुन २३ गते । निर्माण व्यवसायी सङ्घ बाँकेको अध्यक्षमा टेकवहादुर खड्का निर्वाचित हुनुभएको छ । यसैगरी बरिष्ठ उपाध्यक्षमा लिलालराज उपाध्याय पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ । अध्यक्षमा निर्वाचत खड्काले कुल..
महिला तथा किशोरीका लागि नेपालगञ्जमा आत्म सुरक्षा तालिम शुरु
नेपालगञ्ज । महिला तथा किशोरीहरुका लागि तीन दिने आत्मसुरक्षा तालिम शुक्रबारबाट नेपालगञ्जमा शुरु भएको छ । १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मुल समरोह समितिको आयोजनामा महिलाहरुका लागि..
शनिबार, फागुन १५, २०७७ साल
नेपालगञ्ज,फागुन १४ । नेपालगन्ज–खजुरा सडक खण्डमा पर्ने बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ मानपुर मोडको २ तले पक्कि घर भत्काइएको छ । खजुरा रोडमा हुने अधिकाँश दुर्घटनाको कारक मानिएको घर भत्काउने बर्षोदेखिको प्रयास शुक्रबार..
सोमबार, फागुन १०, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, फागुन १० । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि विभिन्न अभियोगमा पक्राउ गरेका ब्यक्तिलाई सार्वजनिक गरेको छ । चितुवाको छाला सहित ३ जना पक्राउ परेका छन् ।..
प्रजातन्त्र दिवसमा विरामीलाई फलफुल
शुक्रबार, फागुन ७, २०७७ साल
नेपालगञ्ज,फागुन ७ । प्रजातान्त्र दिवसको अवसरमा शुक्रबार बाँकेमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । सरकारी र निजी स्तरबाट दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम भएका छन । दिवसको अवसरमा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले भेरी..
सोमबार, फागुन ३, २०७७ साल
नेपालगञ्ज, फागुन ३ । पार्टीका नेता तथा पूर्व शहरी विकास मन्त्री मो. इस्तियाक राईको प्रमुख आतिथ्यतामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा न. १४ ले सोमबार कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम गरेको..
नेपालगञ्ज, फागनु ३ । प्रेस संगठन बाँकेको बैठक सोमबार नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । संगठन बाँकेका संयोजक डक्टप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पत्रकार दिनेश ठाकुर, जावेद अहमद शाह र जयपती..
बर्दियामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि सामाजिक अगुवा बिच संवाद
नेपालगञ्ज, फागुन ३ । प्लान ईन्टरनेशनल नेपाल र भेरी वातावरणीय विशिष्टता समुह (बी ग्रुप) बाँकेको साझेदारीमा सञ्चालित बाल विवाह रोकथाम परियोजना (नोराड) अन्तर्गत बाँसगढी नगरपालीका वडा नं ६ र ८..
जन्मदिनमा आचार्यले गरे बाल मन्दिरमा सहयोग
बिहीवार, माघ २९, २०७७ साल
नेपालगन्ज,२९ माघ । नेपाल बाल संगठनका अध्यक्ष दत्तप्रसाद आचार्यले आफ्नो जन्मदिन बाल मन्दिरमा अध्ययनरत बालबालिकासंग मनाउनु भएको छ । सो अवसरमा आचार्यले १५० जना बालबालिकालाई दिवा खाजाका लागि प्रयोग हुने..
राणाले खोलिन नेपालगञ्जमा पहिलो पटक आर्ट ग्यालरी
नेपालगञ्ज, माघ २९ गते । नेपालगञ्जमा बिहिवारदेखि आर्ट ग्यालरी सञ्चालनमा आएको छ । नेपालगञ्जको बाटिका होटलका प्रबन्ध निर्देशक शिवाङ्गिनी राणाले आर्ट ग्यालरी सञ्चालनमा ल्याउनुभएको । आर्ट ग्यालरीको नेपालगञ्जका मेयर डा...
दुईसातादेखि श्रीमानको खोजीमा कल्पना
बुद्धबार, माघ २८, २०७७ साल
बाँके,माघ २८ । बाँकेको राप्ती–सोनारी गाउँपालिका २ खोरियाकी कल्पना वली दुईसातादेखि श्रीमानको खोजीमा हुनुहुन्छ । उहाँले ईलाका प्रहरी कार्यालयमा समेत श्रीमानको खोजीका लागि आग्रह सहित निवेदन दिनुभएको छ । प्रहरीमा एकजना..
नेपालगञ्जबाट चोरीएका मोटरसाईकल पहाडी जिल्लामा बिक्रि गर्ने गिरोह पक्राउ
नेपालगञ्ज, माघ २८ गते । नेपालगञ्जका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका मोटरसाईकल पहाडी जिल्लामा बिक्रि हुने गरेको पाइएको छ । चोरीका मोटरसाईकल रोल्पा, प्यूठान, दाङ, जाजरकोट लगायतका पहाडी जिल्लामा बिक्रि हुने गरेको..
बाँकेको खजुरामा जनतासंग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालन
सोमबार, माघ २६, २०७७ साल
खजुरा, २६ माघ । खजुरा गाउँपालिकामा जनतासंग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । जनताका समस्यासंग हातेमालो गर्ने र तत्काल समाधान हुने समस्या हल गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम चालु आर्थिक..
वडाध्यक्ष सुमन मल्लले आफ्नै खर्चमा बनाए जिम सेन्टर
खजुरा, २६ माघ / खजुरा गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष सुमन मल्ल विकासमा निकै अग्रसर बन्दै आउनुभएको छ । उहाँ आसन र भाषणमा त्यति चासो दिनुहुन्न । आफ्नो अधिकांश..
बाँकेका पत्रकारलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने
बाँके,माघ २६ । बाँकेमा क्रियाशिल सञ्चारकर्मीहरुलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइने भएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवहादुर कुरुम्बाङका अनुसार मंगलबार विहान १० बजेदेखि भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा सञ्चारकर्मीहरुलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन..
रामगोपाल स्मृति प्रतिष्ठानको साधारणसभा
आईतवार, माघ २५, २०७७ साल
बाँके,माघ २५ । प्रेस स्वान्त्रता सेनानी रामगोपाल बैश्य स्मृति प्रतिष्ठानको साधारणसभा आईतबार सम्पन्न भएको छ । अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विधान संशोधन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ । साधारणसभाले नेपालगञ्जका..
Results 1369: You are at page4of 46